दाहालको विश्वासको अन्तिम परीक्षा हो, यो : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ,केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस ।
सोमबार, ६ भदौ, २०७३ मा प्रकाशित,
दाहालको विश्वासको अन्तिम परीक्षा हो यो । उनको इमान्दारीता प्रति सधै प्रश्न उठ्ने गर्छ । कांग्रेसको यो विश्वासलाई उनले सम्मान गर्दै सहमतिको पालना गर्नेछन्,, भन्ने विश्वास हामीले गरौ । विश्वास घात गरे कांग्रेसलाई , होईन दाहाललाई अफ्ठयारो पर्ने छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पार्टी भित्र शालिन व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका निकट मानिने कार्की पार्टीभित्र निर्णयक तहमा रहेर पनि आफूलाई प्रचारमा ल्याउन चाहदैनन् । पार्टीले गर्ने कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयमा उनको भूमिका रहने गरेता पनि कार्कीले आफूलाई 'लो-प्रोफाइल'मा राख्न रुचाउँछन् । प्रस्तुत छ-सरकार गठन र पार्टीको आन्तरिक राजनीति माथि केन्द्रीत रहेर कार्कीसंग गरिएको कुराकानीको छोटो अंश:
कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री चयन गर्न पार्टी साभापतिलाई निकै अफ्ठायारो पर्यो नि ?
परिस्थितिले त्यस्तो देखिएको मात्र हो । पार्टीको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनको चटारोका कारण पनि कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री चयन गर्न अलि ढिलाई भयो । यसमा अन्य विशेष केही कारण छैन ।
मन्त्रीका आकाँक्षी धेरै भएर सभापतिलाई गाह्रो भएको भनिदै छ, नि त ?
मन्त्रीका आकाँक्षी धेरै हुनु स्वभाविक नै हो । कांग्रेस पुरानो पार्टी हो । यसमा लामो समय समर्पित नेता कार्यकर्ताको ठूलो संङ्ख्या छ । राजनीतिमा लाग्नेहरु नेतृत्वमा पुग्न खोज्नु स्वभाविक पनि हो । तर पार्टीलाई अफ्ठायारो पार्ने गरी कसैले पनि आकाँक्षा राखेको देखिएको छैन । यो नै कांग्रेसको सुन्दर र सवल पक्ष हो ।
आफूले भनेको र रोजेको मन्त्रालय नपाएर प्रभावशाली नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टी प्रकट गरेको घटनालाई के भन्नुहुन्छ ?
त्यस्तो कुरा होईन । आफूलाई काम गर्न सहज हुने मन्त्रलय पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना सबैमा हुनसक्छ । तर पार्टीले निर्णय गरेर दिएको जिम्मेवारीलाई सबैले पालना गर्न सक्नुपर्छ । मन्त्रालयका नाममा त्यति ठूलो विवाद पार्टी भित्र छैन् । बजारमा अलि ठूलो हल्ला भने भयो । पार्टीको निर्णय त सबैले मान्नै पर्छ नि ।
सबैले मन्त्रीको आकांक्ष राख्दा तपाई भने चुपचाप हुनुहुन्छ ?
म पार्टी निर्णयलाई शिरोपर गर्ने कार्यकर्ता हुँ । यस पाली म पार्टी काममा अझ बढी खट्नु पर्छ भन्ने लागेको छ । यस पटक मेरो चाहना अरु साथीहरु सरकारमा जानुहोस् भन्ने हो । अझ सक्षम नयाँ साथीहरुलाई सरकारमा पठाउनु पर्छ भन्ने मत मेरो छ । मैले त प्रष्टरुपमा भन्दै आएको छु , यसपटक मलाई मन्त्री हुने रहर पटक्कै छैन ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा आएको छ। पार्टी भित्र कामको अभाव छैन । नयाँ ढंगबाट पार्टीमा काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । यसैले पनि म पार्टी काममा व्यस्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु ।
सभापतिले पार्टीमा पेलेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भनिदै छ नि ?
यो आरोप र भ्रम मात्र हो । हरेक विषयमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अन्य सहकर्मी साथीहरुसंग सल्लाह गरेर मात्र सभापति अगाडि बढ्नु भएको छ ।
तपाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ , माओवादीसंग सरकार बनाउने सन्दर्भमै पौडेलले चर्को विमती जनाउनु भएको थियो ?
पार्टी भित्र अलिअलि मतमतान्तर हुन्छन् ।सभापतिसंग केही अधिकार पनि हुन्छ । सभापतिले पार्टीलाई असर नपर्ने गरी गरेको निर्णयलाई कहिले काँही अनुमोदन पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकार गठनका सन्दर्भमा रामचन्द्रजीसंग सल्लाह नै भएको थिएन भन्ने कुरा गलत हो ।
माओवादीलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पिएर सरकारमा सामेल कांग्रेसलाई सरकार राजनीति कति कठिन होला ?
पहिलो कुरा कांग्रेस सरकार राजनीतिमा कहिल्यै लागेन । अहिले संयोगले माओवादीसंग गठबन्धन गरेर कांग्रेस सरकारमा जानु पर्यो । यो कांग्रेसको बाध्यता थियो । धेरैलाई पुष्पकमल दाहालसंग सहकार्य गर्न गाह्रो छ , भन्ने लागेको छ । सहमति अनुसार दाहाल इमान्दार भए भने उनलाई पनि सजिलै हुन्छ । होईन बढी चलाख भएर सहमति तोड्ने काम गरे भने अफठ्यारो कांग्रेसलाई होईन दाहाललाई पर्ने छ ।
माओवादीसंग सरकार बनाउनु पर्ने कांग्रेसको बाध्यता के थियो ?
बढो कठिनताका साथ जारी गरेको संविधान जलाउने काम रोकिएको थिएन । संविधान कार्यान्वयन झन झन पेचिलो बन्दै थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारको मुख्य घटन माओवादीले सरकारबाट बाहिरीने घोषणा गरयो । मुलुकलाई सरकार विहिन या अति कमजोर सरकार दिएर कांग्रेसले रमिता हेर्ने कुरै आउँदैन । देशका लागि कांग्रेस यस पटक आमोवादीसंग सत्ता घटकका रुपमा अगाडि बढ्नु परेको हो ।
सहमति अनुसार दाहालले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व छोडिदेलान्?
यो नैतिकताको प्रश्न हो । दाहालको विश्वासको अन्तिम परीक्षा हो यो । उनको इमान्दारीता प्रति सधै प्रश्न उठ्ने गर्छ । कांग्रेसको यो विश्वासलाई उनले सम्मान गर्दै सहमतिको पालना गर्नेछन्,, भन्ने विश्वास हामीले गरौ । विश्वास घात गरे कांग्रेसलाई , होईन दाहाललाई अफ्ठयारो पर्ने छ ।
संविधान कार्यान्वयन कति जटिल छ ?
संविधानप्रति सबै दल इमानदार भए भने कुनै जटिल छैन । संविधानमाथि राजनीति गर्ने हो भने त संविधान कहिल्यै कार्यान्वयन हुनै सक्दैन ।
संविधानको संशोधनको कुरा आएको छ ?
हो , संघीय गठबन्धनले उठाएका केही कुराहरु संविधानमा समावेश गर्नु पर्ने छ । संविधानमाथि कसैले राजनीति नगरौं । सबैलाई हुने संविधान बनाउनमा सबै एक हौँ । नेकपा एमाले पनि यसमा सचेत छ । कांग्रेसले सबै दललाई समेटेर आमजनको संविधान बनाउने प्रयास गर्दै छ ।